निशाको ‘ओ ! प्रिया’ सार्वजनिक
गायिका निशा कंडेलले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ गीत ‘तस्बिर २-ओ ! प्रिया’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन्।
रोमान्टिक भर्सनको यस गीतमा उनलाई युवा गायक अमन प्रधानले स्वरमा साथ दिएका छन्। ‘तस्बिर १ बोलको निरन्तरता रहेको यस गीतलाई तस्बिरकै गीतकार विष्णुबाबु देवकोटाले लेखेका हुन् । टीका दाहालले संगीतबद्ध गरेको यस गीतलाई राहुल प्रधानले संगीत संयोजन गरेका हुन् ।
म्युजिक भिडियोमा दर्शक श्रोता माझ लोकप्रिय कलाकार आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यस अघिको ‘तस्बिर २ भिडियोमा समेत यही जोडीको अभिनय रहेको थियो । बुद्ध थापाले छायांकन गरेको यस भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन गरेका हुन् । निकेश खड्काको निर्देशनमा भिडियो तयार पारिएको हो ।
लिजेन्स इन्टरनेसनलको एजुकेसनको प्रस्तुति रहेको यस भिडियोलाई गायिका कंडेलको आधिकारिक च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गायिका कंडेलले ‘सधैंलाई ’, ‘नेपाली छोरी’, ‘म के भनौं’ म्युजिक भिडियोहरु सार्वजनिक गरिसकेकी छन्।
प्रकाशित मिति : चैत २१, २०७७ शनिबार १३:२०:२६,